Tikidhada duulimaadyada Singapore ayaa kor u kacay inay garaacaan dhamaadka VTLs
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Singapore » Tikidhada duulimaadyada Singapore ayaa kor u kacay inay garaacaan dhamaadka VTLs
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caafimaadka Warka • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Wararka Singapore • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Waddooyinka safarka ee la tallaalay (VTLs) ayaa la soo bandhigay horraantii Sebtembar, taasoo u oggolaanaysa dadka socotada ah ee la tallaalay Singapore inay ka fogaadaan in lagu soo wargeliyo ogeysiis-guriga haddii ay taa beddelkeeda maraan tijaabooyin badan oo COVID-19 PCR ah.
Warbixin cusub ayaa daaha ka qaadaysa inay sare u kacday ballan-qaadyada duulimaadyada ee ka imanaya iyo ku socda Singapore December 22 ee sannadkii hore, iyadoo dadka safarka ah ay ku yaaceen inay garaacaan ganaaxa SingaporeDariiqyada safarka ee la tallaalay (VTLs), kaas oo loo hirgeliyay si loo xakameeyo fiditaanka kala duwanaanshaha Omicron.
VTL-yada waxaa la soo bandhigay horraantii Sebtembar, taas oo u oggolaanaysa dadka socotada ah ee la tallaalay Singapore si ay uga fogaadaan in lagu soo wargeliyo ogeysiis guriga haddii ay taa beddelkeeda maraan tijaabooyin badan oo COVID-19 PCR ah. Dabayaaqadii Disembar, Singapore lahaa VTLs meel ka mid ah 24 waddan.
Bishii Disember 22, Singapore ku dhawaaqay in la hakiyay iibinta tigidhada VTL laga bilaabo saqda dhexe fiidkii ilaa 21kast Janaayo, marka ay jiri doonto 50% kootada kootada hore. Si kastaba ha ahaatee, dadka safarka ah ee horey u haystay tikidhka duulimaadka VTL waxay sii wadi karaan inay galaan Singapore iyagoo raacaya VTL taariikhda markii hore loo qorsheeyay. Maalintaas, iibka tigidhada dibadda ayaa kor u kacay in ka badan afar jeer celceliska maalinlaha ah ee usbuucii hore iyo soo galitaanka in ka badan labanlaab.
Inta lagu jiro usbuuca soo socda (Diseembar 23 - Diseembar 29) tigidhada la soo saaray safarka gudaha ayaa hoos u dhacay 51% iyo dhoofinta ayaa hoos u dhacay 76%, marka loo eego usbuuca ka hor.
Falanqaynta suuqyada isha ugu sareysa ee Singapore ayaa shaaca ka qaaday in dhammaan tobanka ugu sarreeya ay la kulmeen hoos u dhac la taaban karo oo laba-lambar ah, marka laga reebo Hong Kong, oo hoos u dhac ku yimid 8% iyo Dubai, oo 20% kor u kacday markii hore. usbuuca.
Falanqaynta tobanka goobood ee ugu sarreeya waxay daaha ka qaaday hoos u dhac weyn oo ku yimid ballan-qaadyada duullimaadyada dibadda toddobaadka ka dib joojinta VTL, marka laga reebo Nederlaan, oo la kulmay koror 11%.
Waddooyinka safarka ee la tallaalay ayaa si cajiib ah u caawiyay fududaynta safarka iyo ka imaanshaha Singapore, maadaama toddoba ka mid ah tobanka suuq ee ugu sarreeya ee asalka ah iyo sagaal ka mid ah tobanka goobood ee ugu sarreeya ay yihiin waddamada VTL. Waxaan ka shakisanahay adkeysigeeda Netherlands maadaama meel loo socdo ay saameyn ku yeelato KLM, kaas oo hadda ah maraakiibta shisheeye ee leh saamiga ugu badan Singapore suuqa, tirada kuraasta.